Oke Osimiri Pasifik: njirimara, mbido, ihu igwe, flora na fauna | Netwọk Mgbasa Ozi
Ọ bụ ezie na a pụrụ iwere oké osimiri nile dị n'ụwa dị ka otu ebe ọ bụ na mmiri jikọtara ụwa Earthwa, oke osimiri Pasifik enye oto akamba inyan̄. Ọ bụ otu n’ime akụkụ mbara ala nke nwere ebe dị kilomita 15.000. Mgbatị ya na-amalite site mmiri na-agba mmiri ma rute na mmiri ndịda Antarctica ndị kpụkọrọ akpụkọ. N'etiti mmiri ya, e nwere ihe karịrị agwaetiti 25.000 nke dị na ndịda nke ikuku ụwa. Nke a mere ka ọ bụrụ oke osimiri nwere agwaetiti buru ibu karịa nke jikọtara oke osimiri niile.
N’isiokwu a anyị ga-agwa gị njirimara niile, mbido, ahịhịa na anụmanụ nke Oke Osimiri Pasifik.
1 Mmalite nke Oke Osimiri Pasifik
3 Geology na ihu igwe
4 Ifuru na anumanu nke Oke Osimiri Pasifik
Mmalite nke Oke Osimiri Pasifik
E nwere ụfọdụ echiche sayensị nke na-ekwu na mmiri dị na mbara ụwa anyị malitere ịpụta n'ihi nsonaazụ nke ọrụ mgbawa nke onye ọ bụla nwere ike na-agagharị na-emetụta mmezu nke mbara igwe. Nke a pụtara na ihe dịka 10% nke mmiri niile dị na mbara ụwa adịworị na mmalite. Agbanyeghị, ọ gbasarịrị elu ala ahụ dum.
Oké osimiri a, ruo taa, ọ ka bụ otu n'ime nnukwu ihe amaghi na ngalaba mmụta ala. Otu n'ime echiche ndị a na-ejikarị edebanye na ọmụmụ nke Pacific bụ na ọ mere n'ihi ntụgharị nke ụfọdụ efere nke mere ka ha gafee. Na nchikota nke osisi a, emehere oghere ka lava wee sie ike iji guzobe ntọala oke osimiri kachasị n'ụwa.
Enweghị ihe akaebe na nke a mere dị ka nke a ma ọ bụ otu n'ime ihe ndị kachasị ewu ewu taa. Ma ọ dị oke mgbagwoju anya iji nwee ike igosipụta echiche a na ihe ọ bụla ọzọ. Ozizi ọzọ banyere mmalite nke Oke Osimiri Pasifik sitere n'aka otu ụmụ akwụkwọ ndị tụụrụ aro na mgbe e nwere teknụzụ ọhụrụ, ọ bụ nzukọ nke mmadụ abụọ ọzọ mejọrọ ka ọ na-emepụta. N'ihe banyere efere ndị a, ọ na-akwaga n'akụkụ ha ma rụpụta ọnọdụ na-adịghị agbanwe agbanwe nke nkwụsị ma ọ bụ oghere si apụta. Ọ bụ ebe a ka oké osimiri a ga-amalite.
Anyị ga-eme ka njirimara ndị bụ isi nke Oke Osimiri Pasifik pụta ìhè. N'ihe banyere ọnọdụ, ọ bụ nnukwu mmiri nke nwere àgwà nnu nke sitere na mpaghara Antarctic ruo n'ebe ugwu Arctic. Ha gbasakwara site na ọdịda anyanwụ Australia na Eshia wee rute ndịda na ugwu nke kọntinent America n'akụkụ ọwụwa anyanwụ. Anyị nwere ike ịsị na oke ya bụ ọdịda anyanwụ ya na Oceania na Asia yana ọwụwa anyanwụ ya na America.
Banyere ogo ya, anyị ekwuola na ọ bụ oke osimiri kachasị n'ụwa ma kwekọọ na mpaghara nke kilomita 161,8, na omimi nke àmà site na mita 4280 na 10 924 mita. Nọmba ikpeazụ a na-agbanwe mgbe niile ebe ọ dị na Mariana trenchi na eme njem maka oge ma ọ bụrụ na ọ nwere ike ịba miri emi.
Kemgbe nwere olu nke 714 839 310 cubic kilomita, na-enye gị ohere inweta nnukwu akụ na ụba n'ihe gbasara ụdị ndụ dị iche iche. Usoro okike ya bara uba na ndu di iche-iche ma nke a n’eme ka odi oke nkpa na gburugburu ebe obibi nke uwa.
Geology na ihu igwe
Anyị ga-enyocha nke bụ atụmatụ atụmatụ na usoro ọdịdị ala. Oke Osimiri Pasifik bụ ọdụ ụgbọ mmiri kacha ochie na nke kachasị saa mbara. Enwere ike ịkọwa ya ihe ruru afọ 200 gara aga. N'etiti akụkụ kachasị mkpa nke usoro mkpọda kọntinent na bezin, a haziela ha site na ihe omume dị iche iche dị iche iche na-eme na mpaghara ndị dị n'akụkụ akụkụ nke teknụzụ tectonic.
Ogwe ya ọ dị warara ụfọdụ mpaghara South America na North America, edi ata akamba ke Australia ye Asia. N'ebe a, otutu aku na-achikota ma ihe di iche-iche na ihe omumu. N'ime ime Oke Osimiri Pasifik enwere ugwu ugwu Mesoceanic nke nwere mgbatị nke kilomita 8.700 ma hụ ya site na Ọwara California na ndịda ọdịda anyanwụ nke South America. Ọ na-enwekarị ogo dị mita 2130 n'elu oke osimiri.
Banyere ihu igwe, enwere ike ịtọ ọnọdụ okpomọkụ ya na mpaghara dị iche iche ihu igwe. Kpọmkwem, a kọwara ya na mpaghara ihu igwe 5. Anyị nwere mpaghara nke ogbe, etiti latitudes, ajọ ifufe, mpaghara udu mmiri na ikuku. Ifufe ahia na-etolite n'etiti etiti ndị dị na ndịda na n'ebe ugwu nke ikuku. Ọnọdụ okpomọkụ na-adịgide adịgide kwa afọ ma dị n’agbata ogo 21 na 27.
Ifuru na anumanu nke Oke Osimiri Pasifik
A na-ekwenyekarị na mmiri nke Oke Osimiri Pasifik nwere ọdịdị na ịdị jụụ. Agbanyeghị, mpaghara ọ bụla, ọbụlagodi pelagic, dị iche iche dị ka usoro okike ndị ọzọ nke ụwa. N'ebe a, mmiri mmiri dị iche iche na-apụta, ya mere, ahịhịa ghọrọ ihe kachasị mkpa maka nri anụmanụ. Mmiri mmiri na chlorophytes jupụtara. Ha bu nkewa ahihia ahihia ahihia nke gunyere umu 8200 ma buru ndi nwere chlorophyll a na b. Enwekwara nnukwu algae na-acha uhie uhie nke na-acha ụda ọbara ọbara n'ihi ụda nke phycocyanin na phycoerythrin.
Banyere fauna, n'ihi na ndọtị ya karịrị akarị, ọ na-echekwa ọtụtụ puku ụdị anụmanụ, ọkachasị azụ. Lee plankton bu ihe ndabere nke ihe oriri na ebe nri. Otutu umu nke mejuputara plankton bu uzo ma gosiputa agba mgbe egosiputara ha na microscope. Agba dị iche iche na-esite na-acha uhie uhie na-acha anụnụ anụnụ. Offọdụ n’ime ha na-enwusi ike ebe ọ bụ na enwere ebe miri emi nke anyanwụ anaghị erute. N'ime umu anumanu nke mmiri enwere otutu azụ, sharks, cetaceans, crustaceans, wdg
Enwere m olileanya na iji ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere Oke Osimiri Pasifik na njirimara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Nkewa » Oke Osimiri Pasifik